SUXUFIYIINTA SOOMAALIYEED OO SOO WAJAHDAY DHIBAATOOYIN CUSUB!!!. | gobolada.com
SUXUFIYIINTA SOOMAALIYEED OO SOO WAJAHDAY DHIBAATOOYIN CUSUB!!!.
Nov 13, 2018 - jawaab
Iyadoo aynu ogsoon-nahay in Soomaaliya ay kaalinta hore kaga jirto dalalka ugu badan ee lagu qaarajiyo Suxufiyiinta, taasoo loo-aaneeyo Amaan darida iyo iyadoo aysanba jirin hay’ad ama dowlad la xisaabtanta kuwa dhibaatooyinka isugu jira dilalka, xariga, jir dilka iyo dhibaatooyinka kale u geysta.
Dhibaatooyinkaas isugu jira Dilalka, Cagajugleenta, Jir dilka iyo Xarigga ayay kala kulmaan deegaanada ay ka taliyaan maamulada dalka, Al-shabaab hase’yeeshee waxaa iminka soo wajahday dhibaato cusub oo kuwaa ka duwan kana halis badan, kagadaal markii caburin iyo cabsi gelin kala kulmeen dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, waxayna tani keentay in warbaahinta madaxa banaan xaalada siyaasadeed iyo mida amni ee dalka lagu caburiyo.
Qaar ka mid ah suxufiyiinta ka howlgal magaalada Muqdisho iyo deegaanada ay ka arrimiyaan maamulada dalka ayaa ii xaqiijiyeen in la soo gaarsiiyo fariimo hanjabaadyo ah taasoo ay kala kulmaan dhinaca dowladda.
“Maalin ka hor ayaa la i soo wacay…markii aan ka jawaabay taleefankeyga gacanta ayaa la igu yiri sow hebel ma tihid…..markaas baan ku iri haa waa aniga ee waa qofma adiga?…markii aan iri waxaa la iigu hanjabay in nafta la i dhaafin doono haddii aan ka waan toobi waayo wareysiyada aan ka qaado siyaasiyiinta Mucaaradka, qorista faalooyinka, Warbixinadda iyo aragtida shacabka ee dhaliilaha dowladda iyo waliba ka hadlida fashilka xaaladaha Siyaasadeed ee madaxda dowladda iyo arrimaha quseeya amni-darida caasimada” ayuu yiri mid ka mid ah Suxufiyiinta ka howlgala Idaacad ka mid ah kuwa maxaliga ee Magaalada Muqdisho.
Dhinaca kale Wariye kale ayaa tilmaamay in tacadiyada iyo hanjabaadyada kaga imaanaya dhinaca dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya uu yahay mid lagu doonayo in lagu aamusiyo Saxaafada xorta ah, si shacabka u ogaan xaqiiqada ka jirta dalka.
Sidoo kale Wariye kale ayaa nala wadaagay in hogaanka dalka ee haanta talada haya ay dhaqaale fara badan ku bixiyaan caburinta Suxufiyiinta, wuxuuna xusay in magaalada Muqdisho ay ka howlgalaan dhalinyaro bastoolado ku hubeysan kuwaasoo si gaar ahaaneed ula socda wararka iyo warbixinada ay tabinayaan, taasina ay keentay dhibaato cusub oo ay wajahaan xiligan.
Dhibaatooyinka Suxufiyiinta Soomaaliya in kastoo mar waliba ay taagan tahay ayaa haddana xaaladan waxay keenaysaa in qaar badan ay shaqooyinkooda joojiyaan amaba dalka isaga cararaan, maadaama aysan ogayn cida dileysa iyo halka loo soo jiro.
“Dhanna Murtad ayaa noolagu hanjabaa…dhanna Qaran-dumis….waxaana arrimahaas oo dhan inoogu wacan ka hadlida xaqiiqooyinka dalka, soo bandhigida dhibaatooyinka lagu hayo shacabka Soomaaliyeed….taloow maxaa inoo xigi doonna” waa Guuxa iyo hadal heynta qaar ka mid ah Suxufiyiinta Soomaaliyeed.
Ugu danbeyntii markii ay meesha ka baxday dowladdii dhexe ee dalka maamuli jirtay sanaddii 1991-dii waxaa Soomaaliya lagu dilay tiro ku dhow 72-Wariye, halka sanadkan aynu ku jirno 2018 gudaha dalka lagu qaarajiyey 3-Suxufi, waana sababta keenta inay dalka ka cararaan.
W/Diyaariyey:- Qoraa ahna Suxufi: Bile Maxamed Cabdi (Bile-Baastey).